हिम्मतको हिक्मतले अफ्रिकामा फैलिएको एनआरएन – khabarmala.com
P s एनआरएन ताजा समाचार प्रोफाईल स्टोरी
हिम्मतको हिक्मतले अफ्रिकामा फैलिएको एनआरएन
Newportalmala १९ फाल्गुन २०७७, बुधबार २१:०६	No Comments
अफ्रिका …….! सुन्दै निकै टाढा लाग्छ । यो महादेशसँग नेपालीहरुको अघिल्लो पुस्ता जोडिएको छैन । अफ्रिका नेपालीहरूको परम्परागत ‘लाहुर’ पनि थिएन । त्यसैले वर्षौँ जवानी रित्याएर पैसा र कथा बोकी फर्किने लाहुरे नेपालीले कहिल्यै ‘अफ्रिका’ बोकेर आएनन् । फलत: विज्ञान, प्रविधि र विश्वव्यापीकरणले सिङ्गो विश्वलाई सानो घरको रुपमा परिणत गरिसकेको अवस्थामा पनि अफ्रिका हाम्रो लागि सधैँ टाढा रह्यो !
लामो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरुको गन्तव्य भारत नै थियो । रोजगारीका लागि बिस्तारै नेपालीहरु खाडी क्षेत्रका करिव आधा दर्जन मुलुक पुग्न थाले । रोजगारीसँगै थप अवसरको खोजी गर्नेहरुले भने युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियालाई रोज्न थाले । अहिले पनि यो क्रम जिउँदै छ । अफ्रिका रोजाइ र भूगोल दुबैले टाढा रह्यो ।
तर, अहिले अफ्रिका पहिले जस्तो ‘दूर’ छैन । रोजगारीकैै लागि अफ्रिका पुग्ने नेपालीहरुको सङ्ख्या वर्षेनि बढ्दो छ । हजारौं नेपालीहरु अहिले अफ्रिका महादेशका विभिन्न मुलुकहरुमा रोजगारीमा छन् । खाडी क्षेत्रका मुलुकमा भन्दा अफ्रिकामा कमाइ बढ़ी हुने भएकाले पनि आकर्षण बढ्दो छ ।
सन् १९८० को दशकको उत्तरार्धबाट नेपालीहरु रोजगारीका लागि अफ्रिका जाने आउने गरेपनि यसले तीव्रता पाउन थालेको भने दुई दशक जति भयो । हो, यही क्रममा रोजगारीकै लागि अफ्रिकाको नाइजेरिया पुगे कैलालीका हिक्मत थापा ।
थापाको अफ्रिका यात्रा
सुदूरपश्चिमका चर्चित साहित्यकार गगनसिंह थापा । अछामको दर्ना निवासी थापा २०२५ सालमा तराई झर्दा गगनसिंहका जेठा छोरा हिक्मत चार वर्षका थिए । अब थापा परिवारको उन्नयन कैलालीको टीकापुरबाट शुरु भयो । आफै शिक्षक रहेका गगनसिंहले आफ्ना छोराछोरीको पठनपाठनमा ध्यान नदिने कुरै भएन । टीकापुरबाट विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका हिक्मतले नेपालगन्जबाट आईएस्सी गरे । उनलाई यत्तिले चित्त बुझेन । थप अध्ययनका लागि पश्चिमबाट उनी सुदूरपूर्व हानिए । धरानबाट उनले बीटेकको अध्ययन पूरा गरे ।
खाद्य विज्ञानको ज्ञान भएका थापाले नेपालको प्रख्यात औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपसहित विभिन्न कम्पनीमा काम गरे । कामकै सिलसिलामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगे । जब नयाँ दिल्ली पुगे, उनलाई सम्भावनाका ढोका थप फराकिला भए । थप अवसर खोज्ने क्रममा उनले एक अफ्रिकी कम्पनीले गरेको विज्ञापन देखे ।
नाइजेरियाकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कम्पनी ‘डाङ्गोटे ग्रुप’ले उनलाई अनुबन्ध गर्यो । आकर्षक दाम र कामको अवसरसहित थापा लागे नाइजेरियाको लागोसतर्फ । सन् २००६ मा नाइजेरिया पुगेका थापाले त्यहाँ पन्ध्र वर्ष बिताइसकेका छन् ।
हिक्मत जतिबेला नाइजेरिया पुगे, नेपालीहरुको सङ्ख्या पातलै थियो । बिस्तारै नेपालीहरुको सङ्ख्या बढ्दै गयो । एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई भेट्ने र छलफल गर्ने क्रम शुरु भयो । झण्डै दुई वर्षको अवधिमा एउटा सङ्गठन निर्माण गर्ने र अफ्रिकाभर छरिएर रहेका नेपालीहरु एकत्रित गर्ने वातारण निर्माण भयो । हिक्मतकै हिम्मतले अफ्रिका महादेशमै पहिलो पटक नाइजेरियामा सन् २००८ मा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ स्थापना भयो ।
अफ्रिकाका नेपाली दूत
हिक्मत नाइजेरिया नपुग्दै सन् २००३ मा नै युरोपमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को स्थापना भइसकेको थियो । नेपाल र भारतमा रहँदा उनलाई यो सङ्गठनबारे खासै चासो थिएन । तर, जब अफ्रिका पुगे, उनले एनआरएनएलाई अफ्रिकामा लैजाने प्रयास थाले ।
‘मैले उपेन्द्र डाक्टरसाबसँग प्रस्ताव राखेँ’, नाइजेरियामा एनआरएनए स्थापना पहलबारे उनले सुनाए ‘डाक्टरसाब खुसी हुनुभयो, मेरो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुभयो।’ विश्वभरका नेपालीहरुलाई एउटै मालामा गाँस्ने अभियानको नेतृत्व गरेका तत्कालीन अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोसहितका अभियन्ताहरुका लागि अफ्रिकामा एनआरएन स्थापना हुने कुरा उत्साहप्रद थियो । दुबैतर्फ उत्साह ल्याउने हिक्मतको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा पुगिहाल्यो । सन् २००८ मा थापाकै नेतृत्वमा अफ्रिका महादेशमा एनआरएनको संस्थागत पाइला पर्यो ।
एउटा प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाका कर्मचारी हिक्मत थापाको परिचय फेरिन थाल्यो । उनको फेरिएको परिचय हो, एनआरएनएका अभियन्ता । आज संसारभरको नेपाली डायस्पोरामा उनी यही परिचयबाट चिनिन्छन् ।
‘नाइजेरियापछि हामीले दक्षिण अफ्रिकामा एनआरएन स्थापना गर्यौँ’, अफ्रिका महादेशमा सङ्गठन विस्तारबारे उनले बताए, ‘विस्तारै युगाण्डामा पुगियो, अहिले त यहाँका १६ देशमा एनआरएनए स्थापना भइसकेको छ ।’
अफ्रिकामा एनआरएन स्थापना हुँदै गर्दा इजिप्टमा दूतावासबाहेक नेपालको आधिकारिक अन्य कुनै निकाय थिएन । पछि दक्षिण अफ्रिकामा सरकारले नेपाली नियोग स्थापना गर्यो । तर, ५४ देशमा फैलिएको अफ्रिका महादेशभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई सेवा दिन सरकारी नियोगलाई सजिलो थिएन, न त संभव नै थियो ।
एकातिर अफ्रिका पुग्ने नेपालीहरुको सङ्ख्या बढ्दै थियो, अर्कोतिर उनीहरुले त्यहाँ भोग्ने समस्या पनि थपिँदै थिए । तर, समाधान कसरी ?
जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान भनेझैँ समाधानको नेतृत्व लिए हिक्मत थापाले । उनकै नेतृत्वमा एनआरएनएले समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई सहयोग गर्न थाल्यो । ‘सरकारी निकाय त पहुँच भन्दा निकै टाढा थिए’, थापाले त्यतिबेलाको अवस्था सुनाए, ‘त्यही अवस्थामा हामीले समस्यामा परेका साथीभाइलाई सहयोग गर्न थाल्यौँ ।’ जुन अहिलेसम्म जारी छ।
‘अफ्रिकामा रहेका नेपालीहरुका लागि एनआरएनए अभिभावक नै हो’, थापाले बताए । उनका अनुसार, पासपोर्ट हराउनेदेखि नवीकरण, नेपालीहरुको निधन, गम्भीर बिरामी तथा रोजगारीमा बेलाबेलामा समस्या आउने गर्छ । झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्ने तर भोग्नेलाई साह्रै असजिलो यिनै समस्याको समाधान गर्दै जाँदा एनआरएनएप्रतिको आकर्षण पनि बढ्दै गएको उनले सुनाए ।
परिवारसहित नाइजेरियामा रहेका हिक्मतले अफ्रिकामा रहेका नेपालीहरुलाई सहयोग त गरेकै छन्, नेपालमा समस्यामा रहेका नेपालीहरुलाई पनि उत्तिकै सहयोग गरिरहेका छन् ।
एनआरएनएको पहिलो उद्देश्य हो, नेपाल बाहिरका नेपालीलाई जोड्ने । दोस्रो हो, मातृभूमिको सेवा गर्ने । स्थापनाकालदेखि नै यसले आफ्नो कर्म गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालबाहिरका नेपालीहरुले त्यहाँ कमाएको धन रेमिट्यान्समार्फत नेपाल पठाउनु पनि नेपालका लागि ठूलो सहयोग हो । २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीपछि नेपाल जुरुक्कै उठ्नुमा त्यही रेमिट्यान्सको सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको छ ।
विदेशमा कमाइ, नेपालमा लगानी अर्को पाटो छ । पछिल्लो समयमा विदेशमा कमाइ गरेर नेपालका कृषि तथा अन्य उद्योगमा लगानी गर्ने नेपालीहरुको सङ्ख्या पनि थपिँदो छ । नेपालमा विपत्ति पर्दा गर्ने मानवीय सहयोग त छँदै छ । यी सबै अभियानमा उत्तिकै र निरन्तर सक्रिय छन्, थापा ।
खाडी, युरोप र अमेरिका लगायतका देशहरुको तुलनामा अफ्रिकामा नेपालीहरुको सङ्ख्या सानो छ । तर, ‘२०७२ सालको भूकम्प होस् वा अहिलेको कोभिड महामारी, हामीले मानवीय सहयोगमा कमी गरेका छैनौं’, थापाले सुनाए ।
उनकै प्रस्ताव र प्रयासमा नेपालमा भूकम्प पीडितहरुलाई राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले उनी कार्यरत कम्पनी डाङ्गोटे ग्रुपले दस लाख डलर (लगभग दस करोड नेपाली रुपियाँ) तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला मार्फत नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
” मेरो अफ्रिका बसाइको अवधिमा मातृभूमिको लागि सबैभन्दा ठूलो सहयोग जुटाउन पाएकोमा म सन्तुष्ट छु,” उनले भने।
एनआरएनएले गतवर्ष चितवनमा ‘ब्लड बैंक बस’ प्रदान गर्यो । अबको योजना छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई दिने । कैलालीको जिल्ला रेडक्रसलाई ब्लड बैंक बस दिने योजना छ र यसको नेतृत्व गरेका छन्, तिनै थापाले ।
अहिलेको योजना भनेको ब्लड बैंक बस हस्तान्तरण गर्ने हो, उनले भने, यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ, अब छिट्टै बस हस्तान्तरण हुनेछ । थापाका अनुसार, सातै प्रदेशमा कम्तीमा एकएक वटा यस्ता बस प्रदान गर्ने सङ्घको योजना छ ।
उनी सहभागी थुप्रै योजना सफल भएका छन् । अफसोच, एउटा ठूलो सपना भने उनले पूरा गर्न सकेका छैनन्, त्यसको बाधक बनेको छ, स्वयम् नेपाल सरकार ।
पूरा नभएको एउटा सपना
नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सरकारको योजना छ । जुनसुकै दलले सरकारको नेतृत्व गरेपनि यो नारा साझा बनिसकेको छ । तर, हिक्मतलाई यो नारा ‘भन्नका लागि मात्रै भए जस्तो’ लागेको छ ।
नाइजेरियामा उनी कार्यरत औद्योगिक समूह अफ्रिकाकै ठूलो औद्योगिक समूह हो । थापाले उक्त समूहलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरे । स्वीकृत पनि भयो । प्रस्ताव तयार पारेर नेपाल आए, सरकारले पनि प्रस्ताव बुझ्यो । यो झण्डै सात वर्ष अघिको कुरा हो । तर, प्रगति ?
‘करिव ६० अर्ब लगानीको योजना थियो’ निराश भावमा उनले सुनाए, ‘पहिले सबै हुन्छ भनियो, पछि निर्णय नै हुन सकेन।’ नेपालले अझै वैदेशिक लगानीका लागि वातावरण नै बनाउन नसकेको उनको ठम्याइ छ । धादिङमा सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गर्ने उनको योजना उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डको अनिर्णयको शिकार बनिरहेको छ ।
कम्पनीको एउटा जागिरेले त्यहीँको कम्पनीमार्फत नै लगानी भित्र्याउन गरेको यो पहल चानचुने थिएन । ‘अझै पनि प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ’, आशा व्यक्त गरे ।
अफ्रिकाको जीवनशैली र उनका प्रयासपछि कुरा निस्कियो, भाषासाहित्यको । एनआरएनएको भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा सम्पदा समितिको संयोजक रहेका थापाले प्रवासी साहित्यमा केही नयाँ काम गर्ने योजना बनाएका छन् ।
प्रवासी नेपाली साहित्यकारलाई चिनाउने प्रयास
सीमाबाहिर रहेर पनि नेपाली साहित्यकारहरुले कलम चलाइरहेका छन् । विभिन्न कृतिहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । विदेशमा रहेका यस्ता साहित्यकारको पहिचान गर्ने र उचित सम्मान गर्ने उनको योजना छ ।
गैरआवासीय साहित्यकारहरुलाई सम्मान गर्न उनले एउटा छुट्टै कोष स्थापनाको तयारी गरेका छन् । त्यसैका लागि पच्चीस लाख रकम सङ्कलन भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
‘हामीले वार्षिक कम्तीमा एउटा कृतिलाई पुरस्कृत गर्ने योजना बनाएका छौं’, उनले योजना सुनाए । यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण सोचेजति प्रगति गर्न नसकेको बताएका उनले यो कार्यकालको अन्त्यसम्ममा भने यसले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
विदेशमा रहेका साहित्यकारहरुको संस्था अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज(अनेसास)सँग पनि सहकार्य गरिएको बताउँदै उनले एनआरएनएले नेपालबाहिर भाषा र संस्कृतिका रुपमा नेपाललाई चिनाउने काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘पहिले नेपालबारे थाहै नपाएका विदेशीहरु पनि अहिले नेपाली चाडपर्वमा रमाउन थालेका छन्’, उनले खुसी साटे ।
भाषा, साहित्य, मानवीय सहयोग र लगानी सहितका विभिन्न आयामहरुमा सक्रिय थापा आफू पूर्णरुपमा एनआरएन अभियानमा नै सक्रिय रहेको बताउँछन् ।
अफ्रिका महादेशमै एनआरएनएका संस्थापक थापा सन् २००८देखि निरन्तर एनआरएनएमा विभिन्न पदमा रही काम गर्दै आएका छन् । शुरुमा नाइजेरियाको अध्यक्ष रहेका थापा सन् २०११ मा अफ्रिका महादेशको संयोजक चुनिए । सन् २०१५ देखि एनआरएनए आइसीसीको लगातार दुई कार्यकाल कोषाध्यक्ष बनेका थापालाई गत अधिवेशनमा भने सोचेजस्तो सफलता हात लागेन ।
उपाध्यक्षका उम्मेदवार रहेका थापा चुनावी प्रक्रियामा पछि परे । तैपनि उनले अभियान छाडेका छैनन् । हाल भाषासाहित्य समितिको नेतृत्व गरिरहेका थापालाई सोधियो, आगामी अधिवेशनमा कुन पदमा चुनाव लड्ने ?
थापाले जवाफ भने घुमाउरो पारामा दिए । ‘गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आउन अझै आठ महिना छ, यत्ति बुझ्नुस् म अभियानमै छु ।’
Previous Previous post: विदेशमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुने नेपालीको संख्या ३३६ पुग्यो
Next Next post: सरकार र विप्लव समूहबीच तीन बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर
एनआरएन अमेरिका विघठनको संघारमा, आईसिसिको निर्णय लत्याए खारेज हुने १९ फाल्गुन २०७७, बुधबार २१:०६
कांग्रेस महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरि परिवर्तन हुने १९ फाल्गुन २०७७, बुधबार २१:०६
पत्रकार महासंघ अध्यक्षमा पोखरेल प्यानल विजयी : कसको मत कति ? १९ फाल्गुन २०७७, बुधबार २१:०६
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर: नयाँ कोरोना १९ फाल्गुन २०७७, बुधबार २१:०६
चारमन्त्रिको सांसद र मन्त्रिपद खुस्कियो १९ फाल्गुन २०७७, बुधबार २१:०६
धनाढ्यको सूचीमा विनोद चौधरीकाे स्थान खस्कियो,विश्वकै अर्बपतिमा अमेजन मालिक जेफ बेजोस १९ फाल्गुन २०७७, बुधबार २१:०६